Mpanamboatra sy mpamatsy Aluminium Composite vita amin'ny solika China | Chenyu
Ny takelaka vita amin'ny aluminium vita borosy dia be fangatahana tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, izany dia satria ny takelaka mifono borosy dia misy safidy maro samy hafa miaraka amina endrika tsy miova. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny takelaka borosy dia ny fivoahany amin'ny loko isan-karazany. Ny fampiasana ny takelaka borosy ao an-dakozia sy efi-trano dia mahazatra ihany koa.
1. Ny takelaka vita amin'ny alimina borosy dia fantatry ny fisehon'izy ireo toy ny fananana tsy misy afo mirehitra, ny ins insulateur, ny tanjaka sy ny faharetany, ny fisaka amin'ny endriny ary ny malama.
2. Raha ampitahaina amin'ny tontonana aluminium misy sosona tokana dia manana fetra elastika lehibe izy ary tsy mora simba, ary afaka mitazona fahombiazan'ny fisaka tsara mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fanjakana voajanahary tsy misy hery ivelany.
3. Ny famolavolana loko sy lamina manankarena dia mifanaraka amin'ny fandrindrana ny fampifanarahana ny fepetra takian'ny tontolo iainana isan-karazany, ny fampifanarahana ny endrika maritrano amin'ny tontolo iainana, ny loko voafidy dia mirindra amin'ny tontolo iainana, mahatratra ny firaisan-kina tonga lafatra amin'ny vokatry ny kanto amin'ny ankapobeny, manome ny olona fahitana mamirapiratra sy tsara tarehy. fahafinaretana.
4. Ireo akora vita amin'ny aliminioma sy plastika ao amin'ilay tontonana fananganana aliminioma nariana dia azo averina 100% ary manana enta-mavesatra amin'ny tontolo iainana.
Ny fampiharana mahazatra indrindra amin'ny tontonana boribory boribory dia ny fampiasana ny takelaka rindrina sy ny valindrihana ho an'ny tionelina, takelaby sy famantarana, ampiasaina amin'ny famokarana vatan'ny fiara sy sambo, ny rindrina anatiny sy ivelany.
1) Ny fanodinana asa vita amin'ny tontonana vita amin'ny borosy dia karazan'asa famokarana izay mampiasa taratasy sandbara matetika hamongorana tariby eo ambonin'ny tontonana vita amin'ny aliminioma.
2) Ny fizarana dia mizara telo amin'ny ankapobeny: degrease, ny mill mill ary ny fikosehana rano. Ao amin'ny fizotran'ny tariby ataon'ny tontonana mitambatra aliminioma, aorian'ny fanodinana ny anoda, ny teknolojia manodidin'ny hoditra manokana dia hamorona sosona epithelial, izay misy vy, eo ambonin'ny tontonana vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina, ka mahatonga ny tariby bitika tsirairay dia hita miharihary, ka maneho toy izany gloss amin'ny metaly metaly.
3) Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny vokatra vita amin'ny tabilao vita amin'ny aliminioma izay nanamboatra asa tanana fanaovana tariby eo ambonin'ny tontonana aluminium mba hahatonga azy ho tsara tarehy sy mahatohitra harafesina.
Teo aloha: Tabilao fitambaran'ny alim-bolo avo lenta
Manaraka: Panel momba ny firafitry ny Aluminium tsy mety maty